::Rojgar Manch||Online Newspaper :: Employment Nepal News, Financial Nepal News, Nepal Breaking News, Nepali Latest News, Top Headlines News, National, Political News, Social, Sports, Economy, Business, Health, Entertainment, Nepali Movie, Nepali Music Video and World News, Nepal Bank News, business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Nepal Weather सुभद्रासँग पैसा असुल्ने दाउमा पाण्डे परे अख्तियारको फन्दामा:: Rojgar Manch ::
सुभद्रासँग पैसा असुल्ने दाउमा पाण्डे परे अख्तियारको फन्दामा
विहिवार, २०७४ कार्तिक २९ गते ०८:०५
प्रति कामदार ९ लाख लिएर ५० नेपालीलाई युएई पठाएकि एसआरएस मेनपावरकि संचालिका शुभद्रा बराल राम्रै कमिसन कुम्ल्याउन पाएपछि नेकै ठाटीएर हिंड्न थालेकी थिइन । यो कुरा करिव एक वर्ष पहिलाको हो । नहिडून पनि कसरी एकलट कामदार पठाउदै उनको हातमा करोड भन्दा बढी पैसाको बिटो हात लाग्यो ।
तर ‘पाप धुरी बाट कराउछ’ भन्ने उखान होस् या ‘लुटेको धन धेरै दिन टिक्दैन’ भन्ने मान्यता बरालको हकमा भने वास्तविकतामा बदलियो । हुन् त घरबारि बन्दकी राखेर चर्को ब्याजमा ऋण लिएर बराललाई पैसा बुझाएका गरिब कामदार सँग बढी पैसा लिएर अत्याचारै पो गरेकी भन्ने पाप धर्मको हेक्का समेत नराख्ने बराललाई बेला–बेला ति कामदार सँग असुलेको पैसाले पोल्थ्यो पनि होला । तर जब उनले पठाएको कम्पनीले काम नदिएपछि सबै कामदार फर्किए उनको जीवनमा भने ठुलै डढेलो नै लाग्यो ।
मासिक ४ हजार कमाउने सपना देखेका ५० नेपाली ६ महिना जसो त अलपत्र नै परे । ति ५० नेपाली २०७३ असोजमा युएई उडेका थिए ।
आफ्नै र केही संघ संस्थाको बलबुतामा ५० मध्ये ४३ कामदार नेपाल फर्किए र चैत्र ६ गते मेनपावर सञ्चालिका बरालविरुद्ध तीन करोड ३८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको भन्दै क्षतिपूर्तिका लागि सामूहिक रूपमा विभागमा उजुरी दर्ता गराए ।
नाफाको रुपमा आफ्नो खल्तीमा बसेको पैसा बरालले त्यति सजिलै किन दिन्थिन होला र । दिइनन पनि । तर विभागले बरालको घर जग्गा कारोबार र मेनपावरको काम तत्काल रोक्का गर्यो । त्यसपछि उनले सरदार एक÷डेढ लाखको दरले केही पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइन तर त्यसको लागि उनको बन्द गरिएको घर जग्गा कारोबार फुकुवा गर्नुपर्ने भयो । कारोबार फुकुवा भयो,उनको जग्गा धितो राखिन र बैंकमा पैसा हालीदिइन । थोरै भएपनि पीडितले राहत पाए ।
तर बरालले राहत पाएको महसुस गरेकी थिइनन । कारण अझै उनको मेनपावरको काम कारबाहि विभागले रोक्का नै गरेको थियोे । पछिल्लो रोक्का त छदै थियो तर विभागको अनुगमन शाखामा एसआरएस बिरुद्द एउटा आर्को पनि उजुरीको फाइल थियो फरफारक नलागेको । तत्कालिन श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहरा र विष्णु प्रसाद लम्साल मन्त्रालयको सचिव भएको बेला एसआरएस माथि अनुगमन गरिएको थियो ।
सचिव लम्साल युएई भ्रमणमा गएका बेला नेपालका केही मेनपावरले कामदार सँग कति सम्म असुलेका हुँदारहेछन भन्ने चाल पाएका थिए । त्यहि सुइको पाएका सचिव लम्सालले सहचिवको नेतृत्वमा केही मेनपावरमा अनुगमन गराए । परिणाम भेट्टियो पनि । साढे सात लाख तिरेर एक व्यक्ति एसआरएस बाटै युएई जान लाग्दै थिए । अनुगमन पछि बरालले ति कामदारको साढे सात लाख त फिर्ता गरिन तर विभागमा पुगेको फाईल बन्द भएको थिएन । त्यति बेलाको त्यो अनुगमनको फाइल र ४३ कामदारले उजुरी गरेपछि बन्द भएको मेनपावरको काम फुकुवा गर्न बरालले अनेक संयन्त्रको प्रयोग गरिन । तर कुरा पैसामै अड्किन्थ्यो ।
बिना पैसा वल्लो टेबलको फाइल समेत पल्लो टेबलमा नसार्ने विभागका कर्मचारी त्यति ठुलो कान्ड बाट त दरै दाम झार्ने आशमा थिए । तर ठुलै मोलमोलाई चलेपछि अन्तत बराल अदालत गईन र गत जेठमा अदालतले एसआरएसलाई कालो सुची बाट हटाउनु भन्दै परमादेश जारी गर्यो ।
तर अदालतको आदेशलाई पनि विभागका अधिकारीले अटेर गरे,कुरा टुंगिन्थियो पैसा मै ।
‘पैसा र सोमरस‘ भनेपछि हुरुक्कै हुने महानिर्देशक पाण्डे सरकारी जागिरको अवकासलाई अवसरमा बदल्ने अनेक प्रयत्नमा थिए । नयाँ मेनपावर दर्ता,संचालनमा रहेका मेनपावरको अनुगमन, उजुरी, लगायत अनेकन नाममा करोडौ उठाएका पाण्डे मोटै रकम हात पारेर एसआरएसको काम कारबाहि फुकुवा गर्ने दाउमा थिए ।
विदेशिने कामदारलाई ‘अति’ गर्ने बराल आफु भने अतिको नाममा अत्याचार गर्ने विभागका कर्मचारी बाट आजित बनेकी थिईन् । त्यहि आजितको अचानो बने विभागका शाखा अधिकृत कृतिवल्लभ पौडेल र नायव सुब्बा खड्गबहादुर केसी । मौका मिल्दा अन्य मेनपावरलाई अचानो बनाउने पौडेल र केसी पाण्डेको हुलाकी बन्दा आफै अचानो बने । तर यी दुवै एउटा कुरामा भने ढुक्क थिए –‘मह काट्नेले हात त कसो नाचाट्ला’
प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा गरिब कामदार माथि हाबी हुने बराल पाण्डे सँग भने अदृश्य रुपमा हिटलर झैँ हाबी भईन् र दिउसै सोमरस पान गरेपछि पीडितलाई न्याय दिन विभाग जान समेत ‘मारगोलि’ भन्ने महानिर्देशक पाण्डे अवकास पछि अहिलेको भन्दा आनन्द सँग जिउने सोच बनाउदा बनाउदै अख्तियारको कठघरामा पुगे । पाण्डे मंसिर ६ गते उमेरहदले अवकाश पाउदै थिए । पाण्डेले बराल सँग पैसा मागेको रेकर्ड र हिजो पक्राउ परेका अधिकृत र नासुको बयानका आधारमा उनी बस्दै आएको चाबहिलको एक अपार्टमेन्ट बाट आज दिउसो पक्राउ गरेको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति
प्रेस विज्ञप्ति मिति: २०७४।०७।२९ गते ।
घुस रकम सहित नियन्त्रणमा लिइएको।
बैदेशिक रोजगार विभाग, बुद्धनगर, काठमाडौंका शाखा अधिकृत कृति वल्लभ पौडेल ना.सु. खड्ग बहादुर के.सीले का.म.न.पा स्थित म्यानपावर कम्पनीको कामकाज तथा बैंक खाता समेत विभागबाट रोक्का राखेको सम्बन्धमा कम्पनीको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा दायर भई अदालतबाट रोक्का फुकुवा गरि नियमानुसार काम गर्न दिनु भनि आदेश भईसकेको अवस्थामा समेत निज शाखा अधिकृत कृति वल्लभ पौडेल र नायव सुब्बा खड्ग बहादुर के.सि. ले रोक्का फुकुवा नगरी विभिन्न बहानामा सेवाग्राहीसँग घुस रिसवत माग गरिरहेको भन्ने उजुरी एवम् निवेदनको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालबाट खटिई गएको टोलीले निज राष्ट्रसेवकहरूलाई रु.१०,००,०००/- (दश लाख) घुस रकम सहित मिति २०७४।०७।२८ गते बानेश्वर स्थित ईन्द्रेणी फुडल्याण्डबाट नियन्त्रणमा लिएको र उक्त घुस लेनदेन सम्बन्धी विषयमा विभागका महानिर्देशक विश्वराज पाण्डेको समेत संलग्नता प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा देखिएको आधारमा निजलाई चावहिल मित्रपार्कबाट आज मिति २०७४।०७।२९ गते आयोगकै टोलीले नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान भइरहेको छ ।